အချို့သောလက်တွေ့ကျ DIY လက်ကိရိယာများ! - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / အချို့သောလက်တွေ့ကျ DIY လက်ကိရိယာများ!
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2022-01-15 မူလ:ဆိုက်ကို
Tသူသည်လက်သမားအသစ်များ၏မျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ စကားများသွားသည်နှင့်အမျှကောင်းသောအစသည်တစ်ဝက်ပြီးဆုံးသည်။ ၏လျှောက်လွှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသစ်သားကိရိယာများသစ်သားနှင့်ကိရိယာများအကြားအောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်အများဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့ diy မျှဝေဖို့ဖြစ်ပါတယ်လက်ကြိုးသစ်သားကိရိယာများလူတွေအိမ်မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်မှုပစ္စည်းတွေလုပ်နိုင်တယ်။
သံတူတစ်ခုသည်သစ်သားလက်သည်းများတွင်မောင်းနှင်ရန်ဖြစ်သည်။ သံတူသည်အရာဝတ္ထုကိုပိုမိုကြီးမားသောစိတ်ဖိစီးမှုမျက်နှာပြင်ဖြင့်ရိုက်နှက်သောအခါအင်အားသည် longitudinal လမ်းကြောင်းသို့ပိုမိုကောင်းမွန်စွာကူးပြောင်းနိုင်သည်။ DIY ဒီဇိုင်းတွင်၎င်းသည်လက်သည်းကိုခိုင်မြဲစွာပြုပြင်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကစားနိုင်သည် နှင့်စစ်ဆင်ရေးအချိန် - ချွေတာခြင်းနှင့်အဆင်ပြေသည်။
2 ။ဒုတိယ -RuberHammer
ယခင်တစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဤတူသည်ထင်းပေါ်ရှိချို့ယွင်းချက်များကိုစွန့်ခွာရန်ရှောင်ရှားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။Bumppsမလုပ်နိုင်ဖြစ်ကိုရှောင်ကြဉ်edပိုသို့မဟုတ်ဒီထက်နည်း diy diyဘယ်အလိုတော်လဲဦး ဆောင်လမ်းပြချို့ယွင်းချက်များ။ နှင့်ရော်ဘာ Hammer အကူအညီ၏တည်ရှိမှုsချောထုတ်ကုန်များ၏ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှု အောက်ယင်းကြီးစွာသောအကျိုးသက်ရောက်မှု။
လက်ဆီလက်စက်တစ်ခုပါတက္ကသိုလ်စက္ကူပြီးနောက် edဖြစ်ဖြတ်.edလက်ကိုင်စစ်ဆင်ရေးအတွက်အဆင်ပြေသည်နှင့်အချိန်နှင့်လုပ်အားကယ်တင်ခြင်း။ဟုတ်တယ် ကောင်းပြီသိnSandpaper ဖြစ်ပါတယ်စာချုပ်သစ်သား texture ကို polish နှင့် finish ကိုမှ finish ကိုမှ ed ။ Sanding Machine ၏အသွင်အပြင်သည်လုပ်အားပေးခြင်းနှင့်အဆင်ပြေသောပြားချပ်ချပ်နှင့်ကျယ်ပြန့်ပရိဘောဂမျက်နှာပြင်များအတွက်သင့်တော်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသောလက်မှုပညာသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင်တင်းကြပ်စွာပြုလုပ်သင့်သည်။၎င်းသည်အုပ်စိုးရှင်၏တိကျသောတိုင်းတာမှုမှ ခွဲ. မရပါ။အဆိုပါအုပ်စိုးရှင်သည်အနီးဆုံးမီလီမီတာတွင်အရှည်, အကျယ်နှင့်အထူများကိုတိုင်းတာသည်။ ၎င်းသည်စံလိုင်းများနှင့်တိကျမှန်ကန်သော segment ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
5 ။ပဉ္စမ: စော
တစ် ဦး ကတစ် ဦး ကကစားသမားသည်သစ်သားသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်သစ်သားသို့မဟုတ်အခြားအရာဝတ္ထုများကိုဖြတ်ရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာတစ် ဦး ကမြင်၏ရေးစပ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်တစ် ဦး က SAB Bမေှာင်ယဘယ်သူဖြစ်မမှန်စီစဉ်ထား Sawteeth ၏ရေးစပ်။SAW ၏တည်ရှိမှုဖြစ်ပါတယ်‘ကေျာရိုး’idiy ။ငါမရှိtမလုပ်နိုင်ဖြတ်။
6 ။ဆဌမ: ညှပ်
ပရိဘောဂအခါပူးပေါင်းနေသည်သစ်သားလှုပ်ရှားမှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်ရန်အတွက် Clamp သည်ပုံသေအခန်းကဏ္ plays မှပါ0င်သည်။ ပရိဘောဂအခါပူးပေါင်းနေသည်ပရိဘောဂများကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲသည်တခုတည်းသော, တဉီးတည်းသောလက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောကြောင့်ညှပ်ချောင်းသည်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
7 ။သတ္တမ: အမြန်ခြောက်သွေ့သော drying ကော်
Diy Woodworkingသေတမ်းစာမလွှဲမရှောင်အမှားလုပ်ပါနှင့်သစ်သားလည်းအဖိုးတန်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သစ်သားတစ်ချောင်းကိုအမှားဖြင့်ဖြတ်တောက်သည်။Quick ခြောက်သွေ့သောကော်ကျွမ်းကျင်စွာနိုင်ပါတယ်ဖြစ် လျှောက်ထားလျင်မြန်စွာပျောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုနှောင်ကြိုးရန်iဒီအမှု။
8 ။အ eight ္ဌမ: လက်ကိုင် polishing စက်ကျင်းပ
လက်ကိုင် polishing စက်သည်လေယာဉ်, လိုင်, arc မျက်နှာပြင်, ကောင်းမွန်သောကွာဟချက်, groove မျက်နှာပြင်အတွက်သင့်တော်သည်,အခြားကျဉ်းမြောင်းသောအနေအထားနှင့်အလုပ်လုပ်နေမျက်နှာပြင်အရာမလွယ်ကူပါပြီးပြီသမားရိုးကျ tools များနှင့်အတူ။ ကျယ်ပြန့်သည်စာချုပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သေးငယ်တဲ့ volume သေးငယ်တဲ့အတွက်,လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ချောမွေ့စစ်ဆင်ရေးနှင့်ဒါအပေါ်။
diy tool ကိုmanual အလုပ်အတွက်လိုအပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ထွေးသူများသည်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်အံ့သြဖွယ်သစ်သားကိရိယာများသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဆိုအရတောင်းဆိုချက်s ။
wenzhouMIbonder Machinery Co. , Ltd. သည်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်သည်ပါဝါ Tool ကို combo ပစ္စည်းများအပါအဝင်ပါဝါထွင်းထုကိရိယာများ,အိတ်ဆောင်လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်း,သေးငယ်တဲ့ buffing စက်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များစသည်အမျိုးမျိုးသောနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကောင်းပါတယ်။ ကြိုဆိုပါတယ်
အကောင်းဆုံးသစ်သားကြိတ်စက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသစ်သားကိရိယာများ သစ်သားကြိတ်ကိရိယာများ အံ့သြဖွယ်သစ်သားကိရိယာများ သစ်သားကြိတ်စက် ပါဝါထွင်းထုကိရိယာများ အိတ်ဆောင်လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်း သေးငယ်တဲ့သစ်သားကြိတ်စက် Mini Rotary Tool လက်ဆီလက်